श्रीमतीलाई अर्कै केटासंग यस्तो अवस्थामा भेटेपछि नसोचेको भयो, श्रीमती र उस्को यस्तो हालत बनाए (भिडियो सहित) – Sanjal Nepal
Homeरोचकश्रीमतीलाई अर्कै केटासंग यस्तो अवस्थामा भेटेपछि नसोचेको भयो, श्रीमती र उस्को यस्तो हालत बनाए (भिडियो सहित)
April 26, 2021 admin रोचक 13905
काठमाडौ । आजकल धेरै प्रकारका कमेडी लगायत अन्य धारका छोटा चलचित्रहरु निर्माण हुने गर्दछन। मनोरंजन तथा केहि संदेश दिनका लागि बनाइएको यो भिडियो नेपालका बिभिन्न ठाउमा छायांकन गरिएको हो ।द र्शकलाइ भरपुर मनोरंजन दिने उदेश्यले निर्माण गरिएको भिडियोमा कार्यरत प्राबिधिक टोलिहरु पूर्वका रहेका छन् । भिडियोमा समाजमा चलि आएका बिभिन्न बिषयलाइ ब्यंगात्मक तरिकाले प्रस्तुत गरिएको छ ।
November 9, 2020 admin रोचक 7694
म पनि महिला हु तर श्रीमानलाई बिगार्ने महिलानै हुन् ! हामी महिलाहरु ले नै पुरुषलाई भ्रष्टाचारि, जड्याहा ! पर स्त्री गमन (बाहिर मन तन डुलाउने घरमा बस्न मन नगर्ने) एस्तो स्वभाव को हुन बाध्य बनाउछौ
August 2, 2020 Administer रोचक, समाचार 26073
February 9, 2021 admin रोचक 1453
काठमाडौँ । भनिन्छ कि घरकी छोरी र बुहारी लक्ष्मीको रूप हो। यो बिल्कुल सही छ। घरमा छोरीको उपस्थितिलाई लक्ष्मीको प्रवेश मानिन्छ। यी छोरीहरूले छोरालाई भन्दा बढी खुशी र समृद्धि प्रदान गर्दछन्। जहाँ एकातिर घरकी छोरी